Hand Sanitizer, Laundry Detergent, 84 Disinfectants - Huansheng
84 Mishonga inouraya utachiona
Hebei Huansheng Low Carbon Technology Co., Ltd. yakavambwa muna 2013, iyo ine chinangwa chekusimudzira modhi yehupfumi yakavakirwa pakushomeka kwesimba rekushandisa, kusvibiswa kwakaderera uye kuderera kwemhepo, uye kuderedza kuburitswa kwegasi rinokuvadza.
465ml 84 mushonga wekuuraya utachiona
10L 84 Mushonga wekuuraya utachiona
Chenesa Sterilizing Laundry Detergent
Maoko asina kugeza majekiseni
4L 84 Mushonga wekuuraya utachiona
Bata nesu kuti uwane mamwe maalbum emuenzaniso
Zvinoenderana nezvido zvako, gadzirisa iwe, uye ipa yakavanzika label
Isu hatisi chete kugadzira zvigadzirwa, asi zvakare kuronga kukurumidza kuendesa, chigadzirwa chekusimudzira kudzidziswa uye sevhisi yekutengesa.
OEM/ODM processing, cosmetics/ detergent processing, zuva nezuva kemikari raw material supplu uye kudzidziswa kuwacha.
Tine tsvakurudzo yesayenzi uye nzvimbo yekuedza, ine 5 mainjiniya makuru, 15 mubatsiri mainjiniya, ebetsero yepamusoro-soro nanotechnology.
Tikugashirei kutishanyira chero nguva uye mutibvunze, zvisinei kuti uripi, timu yedu yehunyanzvi uye timu yekutengesa ichagadzirisa kusahadzika kwako, kukurudzira zvinhu uye kuendesa zvigadzirwa kumaoko ako munguva pfupi.
Mushonga wekuuraya utachiona unoshandiswa pakurapa une izvi zvishanu zvakanakira
Zvakajairika kusarudza majekiseni ekurapa akakodzera kuti ashandiswe mune yakaderera-level disinfection yezvinhu zvisina-yakakosha munzvimbo dzekurapa. Kushanda kwekuuraya utachiona kunosanganisira zvikamu zviviri, mishonga yekuuraya utachiona uye maitiro ekuuraya utachiona. Maitiro ekuuraya utachiona anoda kuona kuti mishonga inouraya utachiona inowanikwa...
Nzira yekusarudza yakanaka disinfectant?
Zvakajairika kusarudza mushonga wekuuraya utachiona wakanakira kushandiswa kwekurapa mumasangano ekurapa, ayo achashandiswa seyero yakaderera disinfection yezvinhu zvisina-yakakosha. Parizvino hapana mabhuku akaongororwa nevezera rake nezvenyaya iyi. Kushanda kwekuuraya utachiona kunosanganisira zvinhu zviviri, disinfectant uye disinfec...
24 Maawa Online
Isu tinopa yakaumbwa, yakavanzika label yekuwachira detergent, hand sanitizer, 84 disinfectant uye personal care freckle cream.